मुलुकमा धेरै सरकार बने तर ती कुनै पनि गरिबका भएनन्। कस्तो लाग्छ तापाइलाइ हो या होइन ? – Namaste Dainik
August 6, 2020 August 6, 2020 NamastedainikLeaveaComment on मुलुकमा धेरै सरकार बने तर ती कुनै पनि गरिबका भएनन्। कस्तो लाग्छ तापाइलाइ हो या होइन ?
साउन पहिलो साता अधिक वर्षा भयो। यसवर्षको मनसुन सुरु भएदेखि नै हरेक दिन बाढी÷पहिरोका कारण भएको अकल्पनीय क्षतिका खबर आइरहेका छन्। भनिन्छ– प्रकृति र प्रकोपले कसैलाई विभेद गर्दैन। यसले फाइदा र बेफाइदा सबैलाई गर्छ। बाढी, पहिरो, खोलानाला, भूकम्प, आगलागीलगायत धेरैखाले प्रकोपले गरिब, दुःखी र कमजोरलाई नै बढी क्षति पु¥याइरहेको हामीले देखिरहेकै छौँ। कारण भौगोलिक अवस्थिति र निर्माण गरिएका संरचना हुन्।
नागरिक को यो शब्द यो भाब र यो लेख प्रती मेरो उच्च कदर सधै सम्मान।